Zviratidzo zvevanhu - The World March
musha » Zviratidzo zvevanhu
Kubva kuIES punta Larga yeSanta Cruz de Tenerife, vanotitumira
<blockquote> Mifananidzo ye2º yedenderedzwa reKudzidzisa uye Zvemitambo Zvemhuka, module yeATL </blockquote>
IES Gúdar-Javalambre, Mwanakomana de Rubielos
Isu tinokutumira vhidhiyo yechiratidzo chevanhu chekusazvibata kuti vadzidzi uye vadzidzisi venzvimbo iyi vakagadzira yapfuura Gunyana 26.
Vadzidzi veEl Casar Institutes
Vadzidzi veIES Campiña Alta uye IES Juán García Valdemora <blockquote> Panguva yechiitiko cheInternational Nonviolence Day uye kutanga kwe2 World Kurume, 200 vadzidzi Vadzidzi veIES Campiña Alta uye IES Juan García Valdemora, uye vakuru ve50 Casar yakaita Mucherechedzo wevanhu wekusazvibata. </blockquote>
IES MiraCamp, Vila-chaiyo
MuIES MiraCamp vanotiudza kuti: <blockquote> Takajekesa pamusoro penyaya yemushandirapamwe, "Zviratidzo Zvevanhu Verunyararo uye Isiriyoolence". Isu tinofunga zano rako serinonakidza kwazvo, ndosaka tichikutumirai basa redu pamwe nevadzidzi. </blockquote>
IES Antonio Machado, Iye Mutsetse
Kubva kuIES Antonio Machado tumira ichi boka remifananidzo yemagadzirirwo avakaita Human Symbol yeRunyararo.
Kubva kuRosales High Chikoro muMadrid, vanotitumira ichi chiratidzo cheRudzi rweRunyararo.
Zviratidzo Zvevanhu uye Runyararo Sheet
Basa re "HUMAN SYMBOLS uye SABANA DE LA PAZ" rakaitwa pamwe nevadzidzi vepamusoro uye vepuraimari ve "Villa Maria Cano" chikoro mutaundi reMosquera Cundinamarca (Colombia). Kwakaitwa kwakatenderedza zviitiko zvekuvaraidza kusimudzira ziviso yeruzhinji nezvenyaya dzerunyararo uye kusazvibata uye kuzivisa iyo 2 World Kurume uye Runyararo.
Sosaiti yezvefundo muTamil Nadu
30 yaAugust ye2019, Symbol yeRunyararo inoonekwa muInstitute Institution muTamil Nadu (India).
Kubva kuGamo Diana School - Madrid
Pazuva reRugare uye Kwete Ruremekedzo 2019, ndinosunga chiratidzo chatakaita munaJanuary 30 mukati mangu.
Kubva kuECIP Kardinali Herrera Oria weMadrid, pazuva reRunyararo uye Nonviolence 2019, isu tinotumirwa iyi meseji yakaisvonaka kwazvo Vatumwa. Rangu: Kutanga pane zvese, ndinokutendai nekuda kweichi chiitiko chakanaka.
Nezuro takapemberera Runyararo Zuva kuchikoro. Danho rega rega raigadzira ketani rerumwe ruvara riine meseji yerunyararo nerudo. Muchivanze maketani ese akabatanidzwa uye takagadzira denderedzwa negwaro rekuti "Simbisa zvakanyanya isu patiri". Mharidzo dzerunyararo dzaiverengwa, vachipesana nechisimba cherudzi rwese uye takaimba rwiyo. Isu tinokutumira iwe foto neyechikoro rudo rudo iyo yatinoda kupfuura kune nyika yose. Pasina humwe hunhu, gamuchira kwaziso dzerudo.